Toerana mahafinaritra hitsidihana anao amin'ny dia hitanao | Save A Train
Home > Travel Europe > Toerana mahafinaritra hitsidihana anao amin'ny dia hitanao
Mikasa ny dia irery mety ho mikorontana na dia ho an'ny mpandeha efa zotra aza, indrindra raha ny momba ny fisafidianana ny toerana mety haleha sy ny hetsika tokony hatao raha ao no misy. Fa ny tena zava-dehibe, satria te hanararaotra ny tsara indrindra ianao hahitana tena.
Ny maha irery anao eny an-dalana dia ahafahanao mitsidika izay tianao amin'ny fotoana rehetra tianao, nefa tsy mila mifanaraka amin'ny fandaharam-potoanan'ny hafa. koa, azonao atao ny manohitra ny tenanao bebe kokoa amin'ny maha-olon-tsy fantatra anao tanteraka, izay mampitombo ny fahatokisanao, ary mazava ho azy, fitomboan'ny tena.
Voalaza izany, manana toeran-kendrena ao an-tsainao ve ianao amin'ny dia hitanao samirery? Manasongadina ity lahatsoratra ity 7 amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra hitsidihana irery.
1. Toerana hitsidihana ny dia -o: Aostralia
Aostralia no toeram-paniriana nofinofy ho an'ny ankamaroan'ireo mpilomano noho io fanararaotana misitrika tsy misy farany na ho an'ny mpitsangatsangana amateur na efa za-draharaha. Ary na dia tsy vonona hilentika aza ianao, ho finaritra ianao hahita ireo harena miafina maro atolotry ny firenena. I Aostralia koa dia misy ny trano lany tamingana indrindra na karazana biby tandindomin-doza, noho izany dia hanana ny tsy fahita firy ianao hifaneraserana amin'ny fôsily an-tapitrisany taona eo akaiky eo.
Saingy tsy misy amin'ireo voalaza ireo no tena reason maninona izahay no nametraka an'i Aostralia ho toeran-kaleha ho an'ny mpandeha irery. Ny antony lehibe dia ny fandriampahalemana maharitra mandrakizay ao amin'ny firenena, azo antoka fitateram-bahoaka, ary safidy mora vidina. Ho voaro ianao ao Aostralia.
Manankarena ny kolontsaina eto ary matsiro ny sakafo, Ka hanana sakafo an-taonina sy zavatra mifandraika amin'ny kolontsaina hitrandrahana sy hianarana avy amin'ny mponina ianao raha toa ka manam-potoana malalaka ianao. Ny trano sy ny fitaterana dia tena mora vidy eto, tsy lazaina intsony ny fomba azo idirana Bangkok dia avy amin'ny vazan-tany rehetra. Ary raha mitebiteby na sahirana ny sainao, afaka miditra an-kianjan'ny tempoly na foibe misaintsaina sy misaintsaina foana ianao.
3. Toerana hitsidihana ny dia -o: England
Roa taona lasa izay, I Londres no tanàna mpizahatany irery eran-tany. Izay irery dia tokony hilaza aminao fa ity dia toerana azo antoka hipetrahana rehefa tsy manana orinasa. Lapan'i Buckingham no manintona lehibe indrindra ho an'ny mpandeha irery amin'izao fotoana izao, fa tsy izy irery no any Londres. Raha te hahita ireo manintona indrindra ao anatin'ny fotoana voafetra ianao, miditra ao London fotsiny fitsangatsanganana an-tongotra maimaimpoana rehefa mitsidika ny tanàna amin'ny manaraka ianao.
4. Novely zelandy
Ankafizinao ve ny mitondra fiara irery amin'ny lavitra? Maro ny mpandeha irery no tia an'i Nouvelle Zélande safidy fiara mifanaraka amin'izy ireo. Ny hany ilainao dia ny manofa camper na fiara tsotra ary mankeny amin'izay alehan'ny arabe. Izany no iray tsara tarehy firenena mba hijery. Ny olona eo an-toerana koa dia mandray sy manampy betsaka isaky ny mila fanampiana ianao.
5. Toerana hitsidihana ny dia -o: Peru
Saika ny toerana vaovao rehetra izay fitsidihanao dia manokana noho ny antony manokana, fa i Peru dia iray amin'ireo firenena misongadina miavaka. Nahagaga ny olona maro ity toerana ity miaraka amin'ny hatsaran-tarehy sy harena sarobidy, fa ny olona tsy afaka mahazo ampy azy io fotsiny. ny manan-karena tantara, tendrombohitra, ary kolontsaina nentim-paharazana, izay mahaliana ny mpitsidika rehetra. Noho izany, hiaina ny harem-pirenena rehetra, mitsangatsangana any Peru, ary mifankahalala amin'ny firenena.
Etazonia dia samy hafa, ka tsy hahatsiaro ho diso toerana mihitsy ianao na avy aiza na avy aiza. Ny firenena koa dia midadasika ary manana izay ilainao rehetra mba ho tendrombohitra, parks, bibidia, na morontsiraka. Miresaka momba ny torapasika, tsy maintsy mitsidika an'i Florida ianao amin'ny manaraka any Etazonia ary milomano amin'ny fasika fotsy. koa, Disney mety ho toerana lavorary amin'ny dianao fitomboana satria hitondra anao hiverina hampatsiahy ny fahazazanao izany, ary ny nostalgia mangidy kely dia tsy nampijaly olona mihitsy. Ary raha ny ilainao dia fotoana mangina irery, afaka mijanona ao foana ianao a fanofana fialan-tsasatra manalavitra ny valalabemandry.
7. Toerana hitsidihana ny dia -o: Japana
Japon dia mialoha lavitra ny firenena hafa momba ny haitao. Raha futurist teknolojia na mpampiasa vola ianao, ny fijerena ireo fahafaha-manao asa ananan'ity tanàna ity dia azo antoka fa hahafaly anao. Ny firenena koa dia manana trano mahafinaritra, hotely avo lenta, sy trano fisakafoanana, ary koa ny harena voajanahary miafina tsara any Azia. Inona koa, ny rafi-pitaterana mahomby eto dia hahatonga ny dianao irery ho mahafinaritra sy tsy misy olana. Raha mpitia mozika ianao, azonao atao ny mitondra ny solosainao findainao sy ny anao rindrambaiko fanaovana mozika hamela anao hahazo aingam-panahy ary mety hamoaka feo mahafinaritra hanehoana ny dia nataonao irery.
Betsaka ny zavatra tokony hatao sy ianarana any Malezia, fa ny zava-misy mahaliana indrindra momba ity firenena Azia atsimo atsinanana ity dia ny miteny anglisy ny isan-jato betsaka amin'ny mponina. Midika izany fa tsy ho very lalana ianao rehefa mandeha irery eto. Manana tora-pasika ny firenena, tendrombohitra, teboka antsitrika, ary izay rehetra ilainao mila miala sasatra sy mankafy ny fiainana samirery.
Backpacking sy mandeha irery dia nanjary ankafizin'ny andro noho ny fahalalahana mihanaka. Mety ny ataonao. Aza adino fotsiny ny manana teti-bola ampy ho an'ny trano onenananao, sakafo, ary ny filan'ny fitaterana satria tsy maintsy miankina amin'ny tena ianao raha te hankafy ny dia hitanao.
eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao amin'ny drafitra ny Toerana mahafinaritra Hotsidihinao amin'ny dia fitetezana anao amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Toerana mahafinaritra hitsidihana anao amin'ny dia hitadiavanao tena ve ianao” amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Ffun-places-visit-self-discovery-trip%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)